Inona ny paikady marketing? | Martech Zone
Inona ny paikady marketing?
Nandritra izay volana maro lasa izay, nanampy ny mpanjifan'ny Salesforce aho tamin'ny famolavolana paikady momba ny fampiasana tsara indrindra ireo sehatra manana fahazoan-dàlana. Fotoana mahaliana iray ary iray tena nahagaga ahy. Izaho dia efa mpiasan'ny ExactTarget tany am-boalohany, mpankafy marobe ny fahaiza-manao tsy manam-petra an'ny Salesforce sy ny vokatra rehetra misy ao aminy aho.
Ity fanararaotana ity dia tonga tamiko tamin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka Salesforce izay manana laza miavaka amin'ny fampiharana, fampandrosoana ary fampidirana ny fanangonana ireo sehatra Salesforce ho an'ny mpanjifany. Nandritra ny taona maro, nandondona azy ireo tao ivelan'ny valan-javaboary izy ireo… saingy nanomboka nahatsikaritra banga iray tao amin'ny indostria nilaina nilaina izy ireo tetika.
Salesforce dia manome loharanom-bola tsy tambo isaina ary tranga fampiasana tsy manam-paharoa ho an'ireo manantena ny amin'ny fomba tsara ampiasain'ny mpanjifa hafa ny sehatra. Ary ny mpivarotra Salesforce afaka mandray ny fampiharana ny tetika rehetra. Ny elanelana, na izany aza, dia matetika ny orinasa dia miditra amin'ny Salesforce sy ny mpiara-miombon'antoka nefa tsy mamaritra izay tetikady mety.
Ny fampiharana Salesforce dia tsy a Paikady marketing. Ny fampiharana Salesforce dia mety hidika na inona na inona - avy amin'ny fomba fivarotanao, ny olona amidinao, ny fifandraisanao amin'izy ireo, ny fomba fampidiranao amin'ireo sehatra orinasa hafa, ary koa ny fomba refesinao ny fahombiazana. Tsy paikady ny fahazoana fahazoan-dàlana sy fandefasana logins any amin'ny Salesforce… toy ny fividianana boky playbook banga.
Drafitr'asa iray natao hampiroboroboana sy hivarotana vokatra na serivisy.
A barotra tetika dia drafitry ny lalao ankapobeny amin'ny fandraharahana olona hahatratra ny olona ary hamadika azy ireo ho mpanjifa ny vokatra na serivisy omen'ny orinasa.
Raha nividy a ianao barotra tetika avy amin'ny consultant, inona no antenainao hatolotra azy ireo? Nametraka an'ity fanontaniana ity tamin'ny mpitondra aho manerana ny indostria ary ho gaga ianao amin'ny valiny voalazako… hatramin'ny idealy ka hatramin'ny famonoana hatramin'ny farany.
Ny famolavolana paikady marketing dia dingana iray amin'ny ankapobeny dia marketing:
Discovery - Alohan'ny hanombohan'ny dia dia tsy maintsy takatrao ny misy anao, ny manodidina anao ary ny alehanao. Ny mpiasa marketing rehetra, ny consultant voakarama, na ny masoivoho dia tsy maintsy miasa amin'ny dingana iray hahitana. Raha tsy misy izany dia tsy azonao ny fomba fanaterana ny fitaovanao ara-barotra, ny fomba fametrahana ny tenanao amin'ny fifaninanana, na izay loharano anananao.
Strategy - Ankehitriny dia manana fitaovana ianao hamoronana paikady ifotony ampiasaina hanatratrarana ny tanjon'ny varotra. Ny paikadinao dia tokony ahitana topimaso amin'ny tanjonao, fantsona, media, fanentanana, ary ny fomba handrefesanao ny fahombiazanao. Ianao dia mila fanambarana iraka isan-taona, fifantohana isan-telovolana ary fanaterana isam-bolana na isan-kerinandro. Ity dia antontan-taratasy mailamailaka izay afaka miova rehefa mandeha ny fotoana, fa manana ny fividianana ny orinasanao.
fampiharana - Miaraka amin'ny fahatakarana mazava ny orinasanao, ny toeran'ny tsenao ary ny loharano anananao dia vonona ianao hanangana ny fototry ny paikadim-barotra nomerika. Ny fisianao dizitaly dia tsy maintsy manana ny fitaovana ilaina rehetra amin'ny fanatanterahana sy fandrefesana ireo paikadim-barotra ho avy.
famonoana - Ankehitriny efa eo amin'ny toerany ny zava-drehetra, tonga ny fotoana hanatanterahana ireo paikady novolavolao sy handrefesana ny vokany amin'ny ankapobeny.
Optimization - Jereo ny wormhole mahafinaritra nampidirinay tao amin'ny infographic izay mandray ny paikadinay mitombo ary mampita azy io hiverina any amin'ny Discovery indray! Tsy misy vita ny Fitsangatsanganana haingam-barotra. Raha vantany vao novonoinao? Ny paikadim-barotra dia tsy maintsy mandinika, mandrefy, manatsara sy mampifanaraka azy ianao amin'ny fotoana hitohizany hanamafisana ny fiantraikany amin'ny orinasanao.
Jereo fa ny tetika dia mialoha ny fampiharana, ny fampiharana ary ny fanatsarana. Raha mamolavola na mividy tetikady marketing amin'ny orinasa ianao - tsy midika izany fa hampihatra an'io tetikady io izy ireo na hanatanteraka izany.
Ohatra iray amin'ny paikady marketing: Fintech
Manana webinar mahafinaritra miaraka amin'ny Salesforce izahay. Fomba fanao tsara indrindra amin'ny famoronana fitsangatsanganana mpanjifa amin'ny orinasa serivisy ara-bola, izay ifanakalozan-kevitra momba ny fampivoarana ny paikadim-barotra momba ny dia amin'ny orinasa Financial Services. Ny webinar dia tonga taorian'ny nanaovako fikarohana tany amin'ny indostria momba ny fizarazarana nomerika nitranga teo amin'ireo andrim-bola sy ny mpanjifany.
Tamin'ny famolavolana ny paikady ara-barotra, dia hitantsika fa:
Iza ny mpanjifany - manomboka amin'ny fahaizany mamaky teny sy manoratra, hatramin'ny fiainany, amin'ny fahasalamany ara-bola ary ny olona ananany.
Aiza ny ezak'izy ireo amin'ny marketing - ny fahamatoran'ny fikambanan'izy ireo tamin'ny fananganana fifandraisana amin'izy ireo. Fantatr'izy ireo ve hoe iza izy ireo, na nampianatra azy ireo na tsia, raha tena nahazo tombony tamin'ny fianarany tamin'izy ireo na tsia ny mpanjifany, ary raha nisy mpanjifa tena nanantona tena manokana?
Nanao ahoana ny fandaminana? - raha nangataka valiny ny andrim-panjakana, azony natao ve ny manombana ireo fanontaniana etsy ambony, manana loharanom-pahalalana hanabe sy hampitaovana ny mpanjifany ve izy ireo, ary namboarina manokana ve ny dia?
Nahazo loharanon-karena ve ny fikambanana? - ny fikarohana nataonay dia nampiseho lohahevitra roa ambin'ny folo izay notadiavin'ny mpanjifany an-tserasera hatrany - hatramin'ny fitantanana trosa, fitantanana harena, drafitra fananan-tany, hatramin'ny drafitra fisotroan-dronono. Ny mpanjifa dia nitady fitaovana DIY hanampiana azy ireo hanombatombana, handrafitra ary hanatanterahana ny volany… ary ireo andrim-panjakana niarahany niasa dia tokony hanana azy rehetra (na farafaharatsiny hanondro azy ireo amin'ny mpiara-miasa lehibe).
Hita ve ny fikambanana amin'ny dingana tsirairay amin'ny fividianana - manomboka amin'ny famaritana olana, amin'ny fizahana vahaolana, hatramin'ny takiana ary ny fisafidianana fikambanana ara-bola, mety hahatratra ny dingana rehetra amin'ny dian'ny mpividy ve ny fikambanana? Manana fitaovana sy loharanom-pahalalana hanampiana amin'ny fanamarinana ny valin'ny mpividy ve izy ireo ary manampy azy ireo hampandeha ny fifampiraharahana?
Azo tratrarina amin'ny alàlan'ny haino aman-jery tiana kokoa ve ny fikambanana? - Tsy ny lahatsoratra ihany no antonony. Raha ny marina dia misy olona sasany tsy mandany fotoana hamakiana intsony. Mampiasa lahatsoratra, sary, audio, ary horonan-tsary ve ny fikambanana mba hahatratrarany ny vinan'ny mpanjifa sy ny mpanjifany kokoa?
Rehefa vita, ahoana no handrefesana ny fahombiazana amin'ny paikadim-barotrao? Alohan'ny hametrahanao paikady dia tsy maintsy dinihina ny fahaiza-mandrefy mba hahalalanao fa mandeha io. Hafiriana no hiandrasanao vao manapa-kevitra ny amin'ny fahombiazany? Amin'ny firy ianao no hanatsara ny fampielezan-kevitrao? Amin'ny firy ianao no aforeto izy ireo raha tsy miasa izy ireo?
Raha afaka mamaly ireo fanontaniana rehetra ireo ianao dia mety ho mafy orina ny hevitrao barotra tetika. Ny paikady marketing dia hanampy anao hamantatra, hahita ary handrafitra fa mila fitaovana na loharano iray ianao.
Avy amin'ny ohatra fintech etsy ambony, mety ho hitan'ny orinasanao fa tsy manana calculatera fampindramambola trano ity tranokala ity ka manana drafitra hananganana iray ianao. Tsy midika izany fa ny paikady dia mamaritra ny endrik'ilay kajy, ny fomba hampivelaranao azy, ny toerana hampiantranoana azy, na ny fomba hampiroboroboanao azy… izany rehetra izany dia ny dingana fanatanterahana ny fampielezan-kevitra azo atao ny lalana. Ny paikady dia ny fananganana kajy izay ilainao hahatratra ny mpanjifa. Ny fampiharana sy ny fanatanterahana dia avy eo.
Ny paikady dia ny banga eo anelanelan'ny filàna sy ny fanatanterahana
Rehefa miresaka amin'ny fikambanana maro kokoa miaraka amin'ny Salesforce aho dia mandondona azy ivelan'ny valan-javaboary amin'ireo fidirana an-tsehatra ireo. Salesforce dia nanampy ny mpanjifa hamantatra ny filàna vahaolana teknolojia hanampiana azy ireo amin'ny varotra sy ny ezak'izy ireo amin'ny varotra.
Eo ny mpiara-miasa amin'ny Salesforce hanampy azy ireo hampihatra ny vahaolana amin'ireo fizotrany sy paikady antenain'izy ireo hampiharina. Saingy eo anelanelan'ny roa aho mamantatra ny elanelana sy miasa eo amin'ny sehatra, ny mpiara-miasa ary ny mpanjifa hampivelatra ny drafitra hahatratra ny vinavinany sy ny mpanjifany. Rehefa misy ny marimaritra iraisana eo amintsika rehetra dia miditra ny mpiara-miasa Salesforce ary mampihatra ny vahaolana avy eo dia manatanteraka ny paikady ny client.
Ary, mazava ho azy, rehefa mandrefy ny valiny isika dia tokony hanitsy ny paikady indraindray. Amin'ny sehatry ny orinasa, mety maharitra amam-bolana maro izany.
Tags: CRMteknolojia ara-bola-barotrabarotra tetika